Toerana tsy manam-paharoa 5 hifankatia amin'i Brezila | Vaovao momba ny dia
Toerana tsy manam-paharoa 5 hifankatia amin'i Brezila
Ny taona 2016 dia ny Lalao Olaimpika tany Rio de Janeiro. Betsaka no nanararaotra an'io fotoana manokana io nitetezana tany Brezila nandritra ny fahavaratra. Na izany aza, rehefa tapitra ny hadalana amin'ny Lalao Olaimpika dia mahaliana kokoa ny fahalalana ny firenena Rio de Janeiro satria ny vidiny dia tsy nitombo toy ny volana lasa izay ary tsy dia be loatra ny olona any amin'ny toerana sasany izay mety hampihena ny fitsidihana indraindray. mahafa-po.
Noho izany, raha fahavaratra farany dia te-ho any Brezila ianao ary te-hanao izany atsy ho atsy, dia Manolotra zotra misy toerana 5 hitiavanay an'i Brezila izahay, izay tsy azonao adino noho ny maha-zava-dehibe ny tantara, ny kolontsaina ary ny tontolo iainana.
2 Valan-javaboary Iguazú
5 Ny renirano amazona
Ny fijanonana voalohany dia i Rio de Janeiro. Mba hanombohana hahafantarana an'ity tanàna ity, ny zavatra tsara indrindra tokony hatao dia ny mandeha mitsangatsangana amin'ny fidirana amin'ny morontsirak'i Copacabana ary mankafy cocktail matsiro ao amin'ny iray amin'ireo bara amin'ilay toerana eo am-pankafizanao ny rivotra iainan'ny tanàna Rio de Janeiro, iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny mahagaga morontsiraka sy ny fiainany mahatsikaiky.
Ny fijanonana manaraka dia mety ny tanàna afovoan-tanàna sy ny faritry ny seranana satria any no misy ny ankamaroan'ny tsangambato ao Rio, toy ny Arcos de Lapa, ny Teatra Monisipaly, ny fiangonana Candelaria na ny Imperial Palace. Ao amin'ity tanàna ity dia misy ihany koa ny toerana ho an'ny kolontsaina satria noho ireo tranombakoka dia ho afaka hahafantatra bebe kokoa ny tantara, ny fomba amam-panao ary ny fomban-drazana ao Rio ianao toy ny National Museum of Fine Arts, ny National Historical Museum na ny Banco de Brasil Cultural Center.
Ary farany, tsy azonao adinoina ilay Morro de Corcovado fanta-daza izay misy an'i Christ of Corcovado izay malaza kokoa, iray amin'ireo Fahagagana Fito eto amin'izao tontolo izao vaovao efa ho folo taona.
Ny Valan-javaboary Iguazú dia nambaran'ny UNESCO ho lovan'ny vakoka voajanahary voajanahary tamin'ny taona 1986 ary iray amin'ireo harena voajanahary manaitra indrindra ao amin'ny firenena Rio de Janeiro. Ankoatr'izay, Iguazú dia miasa toy ny sisintany voajanahary eo anelanelan'i Brezila sy Arzantina, ka ny riandrano azo jerena amin'ny lafiny roa. Na izany aza, ny boaty fanomezam-boninahitra dia any Brezila satria manomboka eto dia azo atao ny mahita azy ireo avy eo aloha noho ny làlambe sasany namboarina tao anatin'ny zaridaina hahafahan'ny mpitsidika manakaiky kokoa.
Mba hahatongavana any amin'ny ilan'ny Breziliana dia tsy maintsy mandeha amin'ny lalana Foz do Iguaçú ianao ary miditra amin'ny valan-javaboary. Maharitra 2 na 4 ora ny fitsangatsanganana saingy mendrika izany satria fampisehoana tena miavaka izay ahafahanao misaintsaina ny halehiben'ny riandrano sy ny herin'ny natiora. Aorian'ilay fitsidihana dia ho fantatrao ny antony nantsoina ho iray amin'ireo zava-mahatalanjona voajanahary fito eto an-tany ny riandranon'i Iguazu.
Ity tanàna Breziliana ity dia fantatry ny Valan-javaboary Iguazú indrindra fa mendrika hitsidika ny Ecomuseum ihany koa mba hianatra momba ny tantaran'ny tohodrano Itaipú ary koa ny tantara ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana ao amin'io faritra io. Izy io koa dia manana toerana natokana ho an'ny zavakanto sy ny natiora.
I Fernando de Noronha dia vondronosy kely any amin'ny Atlantika atsimo misy nosy 21, izay ny lehibe indrindra ihany no misy mponina. Avy amin'ny volkano, ity toerana ity dia misy morontsiraka tsara tarehy indrindra any Brezila, izay tsy dia be olona toa an'ireo any amin'ny faritra sisa.
Raha ny marina, ny ankamaroan'ny faritany dia nambara ho valan-javaboary voajanahary ary mitazona fifehezana henjana ny fidiran'ny mpizahatany hitahiry io toerana io ny governemanta. Ohatra, i Fernando de Noronha dia tsy mamela mpitsidika mihoatra ny 600 amin'ny fotoana iray na amin'ny fananganana hotely lehibeNoho izany, raha ianao no sasany amin'ireo tsara vintana afaka mitsidika ny nosy dia tsy maintsy mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny kely ianao. Tsy mora ny vidiny fa tombontsoa kosa ny manana fotoana mety hanana toerana manokana toa an'ity iray ity.
Ny sasany amin'ireo hetsika azo atao any Fernando de Noronha dia ny fitetezana onja, ny antsitrika ary ny fiandrasana feso feso sy fano.
Olinda dia toerana ahafantarana azy mandritra ny diany, gaga amin'ny tranombakoka, fiangonana ary tranobe miloko mifangaro amin'ny zavamaniry. Ity tanàna tsara tarehy ity dia miorina ao avaratra atsinanan'i Brezila, ao amin'ny fanjakan'i Pernambuco.
Toerana mahafinaritra nambaran'ny Unesco ho tantara sy kolontsaina momba ny maha-olombelona tamin'ny 1982. Niorina tamin'ny 1535 i Olinda ary taty aoriana dia noravan'ny holandey kalvinista izy ary nodorany ireo fiangonana katolika ka voatery namboarina izy ireo. Amin'izany fomba izany, tranobe maro no manomboka amin'ny taonjato faha-XNUMX, izay manintona mpizahatany lehibe an'i Olinda ankehitriny. Ohatra vitsivitsy ny Convent an'i Sao Francisco, ny Mosteiro de Sao Bento, ny Mercado da Ribeira na ny Sé. Tanàna manome tolotra matsiro ihany koa izy ary tena manolo-tena amin'ny tontolon'ny zavakanto.
Ny renirano amazona
Raha misy toerana mahavariana any Brezila dia Amazon izany. Faritra midadasika izy io izay misy ny ala tropikaly amin'ny fantsakan'i Amazon. Ity ala ity no ala tropikaly lehibe indrindra eto an-tany ary miavaka amin'ny maha-iray amin'ireo faritra biodiverse indrindra eto an-tany.
Ny vavahady mankamin'ny Amazon Breziliana dia Manaus, izao rehetra izao anaty ala mikitroka izay manaraka ny renirano lava sy lava indrindra eto an-tany. Izy koa no renivohitry ny Fanjakana ary iray amin'ireo tanàna malaza indrindra ao Brezila satria izy no tanàna lehibe indrindra any Amazon.
Ny sasany amin'ireo toerana mahaliana indrindra azo tsidihina dia ny zoo eo afovoan'ny ala sy ny torapasika amoron-dranomasina ary ny tranombakoka izay mitondra anao hivoaka ny afovoan-tanàna. Mahagaga fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Toerana tsy manam-paharoa 5 hifankatia amin'i Brezila
Fitsangatsanganana any Iran, toerana manintona ny mpizahatany
Kanada, firenena tsara indrindra mankany amin'ny 2017 raha ny filazan'ny Lonely Planet